“သူ့ဇတ် သူ့အရပ်နဲ့တော့ အဟုတ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “သူ့ဇတ် သူ့အရပ်နဲ့တော့ အဟုတ်”
“သူ့ဇတ် သူ့အရပ်နဲ့တော့ အဟုတ်”
Posted by ခင်ခ on Jul 17, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary |4comments
စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံ၏ နန်းတော်အတွင်း မှန်နန်းဆောင်အလယ် ညီလာခံခန်းမတွင် လွှတ်တော်သဘင် စီရင်ကျင်းပရာတို့ ၀ံမင်းများ မူးကြီးမတ်ရာသေနာပတိ စုံညီစွာနဲ့ အမတ်မင်းများ စုဝေးရောက်ရှိနေပြီး သကာလ
” ဘုန်းတော်ဖွဲ့ ဘုရင်မင်း သရားကြီး ကြွချီလာပါပြီ ”
၀ံမင်း မူးမတ် ဗိုလ်ပါ တွေ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ကြပြီး ဘုရင်မင်းသရာကြီး ပလ္လင်ပေါ်ထိုင်ပြီးသောအခါ အသီးသီး ကိုယ့်နေရာမှာ ပြားပြားဝပ်နေရာပြန်ယူကြလေကာ လွှတ်တော်သဘင်အား စတင်လေပြီ
“ကဲ လျှောက်တင်စရာရှိတာတွေ မချွင်းမချန်လျှောက်တင်ကြစမ်းကွဲ့”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး မြို့တော်ဝံအနေနဲ့ လျှောက်တင်လိုသည်မှာ ယခုအခါရွှေမြို့တော်ကြီးရဲ့ လမ်းအသီးသီးမှာ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ အတော်ပေါများလာပါတယ်ဘုရား အဲဒါကိုနှိပ်နင်းခြင်းမပြုရင် နောင်တစ်ချိန် ရွှေမြို့တော် ကြီးဟာ ခွေးမြို့တော်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း တင်လျှောက်ပါတယ်ဘုရား”
“အိမ်း ဒီစုံညီ ညီလာခံ လွှတ်တော်သဘင်မှာ မောင်မင်းက အတော်ကြီးမားတဲ့ အရေးပါမှုကို သံတော်ဦးတင် ပေတာဘဲကိုး မောင်မင်းက ညဘက်မှ တိုင်းပြည်အရေး လှည့်ကြည့်တယ်နဲ့တူတယ်နော် ဒါကြောင့်လည်း ညမှလမ်းသလားတတ်တဲ့ သဘာဝအရ လမ်းပေါ်မှာ ခွေးတွေများစွာတွေ့ပေသကိုး တိုင်းပြည်ရေးရာ အမတ်ကြီး ဒီကိစ္စဘယ်လိုစီရင်သင့်သလဲ လျှောက်တင်စမ်း”
“မှန်လှပါ ဘုရင့်ဘဏ္ဍာတိုးအောင် ဆိတ်သားရောင်းချရေးအဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်ကာစီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်”
“အိမ်း ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး လက်နက်ဝံအနေနဲ့ လျှောက်တင်လိုသည်မှာ ဘုရားကျွန်တော်မျိုးတို့၏ လက်နက် တိုက်တော် အ၀င်လမ်းသည် လှည်းများအ၀င်အထွက်များသဖြင့် လှည်းလမ်းကြောင်းရာတွင် ရေအိုင်ကာ ဗွက်အိုင်လေးဖြစ်နေပါတယ် အဲဒါဘယ်တော့များ ပြင်ပေးပါ့မလဲ မေးလျှောက်ချင်ပါတယ်ဘုရား”
“အိမ်း ဒါလည်းအတော်ကြီးတဲ့ကိစ္စပေဘဲကိုး ဗွက်အိုင်လေးတွေ့တိုင်း ခြေ၀င်ဆေးတတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် မခက်ပေဘူးလား၊ ကဲ မြို့သာယာဝံမင်း ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ လျှောက်တင်စမ်း”
“မှန်လှပါ ဒီကိစ္စအတွက် အလံသုံးတောင်လောက်ရှိတဲ့ လက်နက်တိုက်လမ်းကို ရေမတင် ဗွက်မနစ်ရေးအတွက် အုတ်ခဲကျိုး အုတ်ကောင်းလှည်း အစီး(၅၀)မှာပြီး ခင်းပေးလိုက်ပါ့မယ်ဘုရား”
“ဟေ အလံသုံးတောင်လောက်ဘဲရှိတဲ့ လမ်းခင်းတာ လှည်းအစီ(၅၀)တောင်လား ၀ံမင်းရဲ့”
“မှန်လှပါ ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဘုရား လုပ်နေရင်းလိုမှာစိုးလို့ပါဘုရား ပိုတာက ဘယ်ဝံမင်းအိမ်ပို့ပို့ ထားလို့ရ ကြောင်းပါ ဘုရား”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး မီးခွက်ဝံအနေနဲ့ လျှောက်တင်လိုသည်မှာ နန်းတော်တွင်း မီးခွက်တွေက ရေနံဆီအပြည့် ရရှိသမို့ ညဘက်တွင် နန်းတော်တွင်း အကြားမလှပ် မီးခွက်များလင်းထိန်စွာ ထွန်းလင်းထားနိုင်ပေမယ့် နန်းတော်ပြင်ပရှိ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ရေနံဆီကို အတိုင်းအတာနဲ့ ရတလှည့် မရတလှည့်မို့ မှောက်မိုက် နေပါ သဖြင့် နန်းတော်တွင်း တစ်ချို့မီးခွက်တွေလျော့ပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေဆီရေနံဆီမျှစေဖို့ ပစ်စာလွှာ တွေ ရောက်နေ ကြောင်းပါဘုရား”
” တယ် ရာရာစစ ဘုရင်နေတဲ့ နန်းတော်နဲ့ နေပြည်တော်အတွင်းကို မီးခွက်လျော့ရမယ်တဲ့ ဟုတ်လား ၀ံမင်း စဉ်းစဉ်းစားစားလျှောက်တင်ကြစမ်း”
“ဘုန်းဘုရား အဲလိုသဘောမျိုးလျှောက်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး စာလွှာပါအကြောင်းအရာကို လျှောက်တင်တာပါ ဘုရား အမြတ်ထွက်တော်မမူပါနဲ့ဘုရား”
“အိမ်း နန်းတော်ပြင်ပ မှောင်လှတယ်ဆို နန်းမြို့ရိုးပတ်လည် ထပ်ပြီး မီးလင်းခွက်တွေတိုးကြ တိုင်းသူပြည်သား တွေကို ပေးရတဲ့ရေနံဆီမလောက်ရင် စိနတိုင်းပြည်နဲ့ ကုန်သွယ်တော်ကို ဖယောင်းများများပိုသွင်းဖို့ အမိန့် တော် ရှိကြောင်း အိမ်တော်ဝံမင်း အကြောင်းကြားစေဟဲ့”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး စစ်မှုရေးရာဝံအနေနဲ့ လျှောက်တင်လိုသည်မှာ လက်နက်ခဲယမ်းများကို စိနပြည်ကဘဲ ၀ယ်နေတဲ့အတွက် အနောက်လွန်ပြည်ဘက်က အခြေအနေတင်းမာနေမှုရှိကြောင်း အသိပေးလျှောက်တင် လိုပါတယ်ဘုရား”
“၀ံမင်းတို့ရဲ့ စီးတော်မြင်းတွေက စိနပြည်က လက်ဆောင်ပဏာအဖြစ်ပေးပို့ပေးတာ ၀ံမင်းရဲ့ ကျုပ်နန်းဆောင် က ကျောက်စိမ်းရေနွေးအိုးကလည်း စိနမင်း ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်လာရောက်စဉ်က လက်ဆောင်ပဏာရတာလေ ဒါကြောင့် စိနပြည်နဲ့ ကျုပ်တို့က ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တူယှဉ်တွဲမူနဲ့ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘေးဘင်ကထဲကရှိကြတာ ဆိုတာလည်း မမေ့နဲ့အုံး ၀ံမင်းရဲ့”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး တိုင်းပြည်ရေးရာဝံအနေနဲ့လျှောက်တင်လိုသည်မှာ ပြည်သူဟစ်တိုင်တွင် တစ်နယ်နှင့် တစ်နယ် ဆက်သွယ်မှုတွင် ဆက်သားစေလွှတ်သွားရောက်မှုနှေးကွေးနေပါသဖြင့် စီစစ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုမှု ရှိနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားအပ်ပါသည်”
“ကဲ ဒီကိစ္စအတွက် ဆက်သားဆက်သွယ်ရေးဝံမင်း ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ဖြေရှင်းတော်မူစေ”
“မှန်လှပါအရှင်မင်းကြီး တစ်နယ်နှစ်တစ်နယ်ဆက်သားဆက်သွယ်သွားရသော မင်းမှုထမ်းအသုံးပြုနေသော စီးတော်မြင်းသည် အိုမင်းနေသည်ကတစ်ကြောင်း မြင်း၏ခြေထောက်ခွာမှာလည်း ပေါက်ပြဲဆွေးနေသည်က တစ်ကြောင်းမို့ပါ အရှင်မင်းကြီး”
“ဟဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝံအနေနဲ့ အဲဒါဆို အသင်တို့မြင်းတွေကို သွက်လက်သောမြင်းငယ်တွေနဲ့ အစားထိုး မစေခိုင်းဘူးလား ဘာလို့အစားမထိုးတာလဲ လျှောက်တင်စမ်း”
“အရှင်မင်းကြီး သွက်လက်သောမြင်းငယ်များနဲ့အစားထိုး ဆက်သွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် တစ်ခါက အစားထိုးမယ့်မြင်းကို လှလွန်းလို့သမီးတော်လေး သိမ်းပိုက်သွားတာရယ် နောက်တစ်ခါအစားထိုးဖို့ မြင်းက အရှင်မင်းကြီးတောထွက်သုံးဖို့ အိမ်တော်ထိန်းက သိမ်းပိုက်သွားတာရယ်ကြောင့်ပါ”
“အင်း ဒီလိုဆိုလည်း ရှိပစေတော့ ၀ံမင်း အဲဒီကိစ္စကို နောက်ညီလာခံမှ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ဖို့ရွှေ့တော်မူစေ”
“အရှင်ဘုရား ကျွန်တော်မျိုးကို လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဘုရား”
“ဥပဒေရေးရာအမတ် ဘာများလဲကွယ့် လျှောက်တင်စမ်း”
“အရှင်ဘုရား ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုပြီး ခိုင်းထားတဲ့ မင်းဘဏ္ဍာခွန်ဥပဒေအကြမ်းပြီးမြောက်ပါပြီ ဘုရား တင်ပြခွင့်ပြုရင် လျှောက်တင်ဖို့ အသင့်ပါဘုရား”
“ဒီဝံတော့ အလိုက်မသိလေခြင်း ဥပဒေပြင်တယ်ဆိုတာ မူးမတ်ဗိုလ်ပါစုံလှတဲ့ လွှတ်တော်တွင်း တစ်ခါတည်း လျှောက်တင်ရတဲ့အလုပ်လား အိမ်တော်ညီလာခံသဘင်ကျမှ ဘုရင့်ရွှေနားတော်သို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ်အရင် တင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတာ မောင်မင်းမသိလေလော ဒီကိစ္စမျိုးက အလျဉ်မလိုသင့်ပါဘူးလေ”
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အရှင်မင်းကြီးခိုင်းစေထားတဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နေပြီမို့ အရှင်မင်းကြီး ၀မ်းသာရအောင် သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သွားတာပါဘုရား သည်းခံတော်မူပါဘုရား”
“အိမ်း ရှိစေတော့ ရှိစေတော့”
“အချိန်လည်း အတော်လင့်လာပြီမို့ စားတော်တည်ဖို့ ပွဲတော်ပြင်ကြစေ ညီလာခံရပ်နားစေ”
” ဘုန်းတော်ဖွဲ့ ဘုရင်မင်း သရားကြီး ပြန်လည်ကြွချီပါမည်”
ဤကားစတုတ္ထမြောက်မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ပျက်မင်းဆက်၏ ပြည်မထိန်းနိုင်မင်းသရာကြီး မှန်နန်းဆောင်အလယ် ညီလာခံခန်းမတွင် လွှတ်တော်သဘင်ကျင်းပခြင်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု အစီစဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည် မိဘပြည်သူ အပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာတော်မူကြပါစေ။
“တူနဲ့တဲ့နယ် တူနဲ့တဲ့နယ် ဗျောင်လိမ် တူနဲ့တဲ့နယ် တူနဲ့တဲ့နယ် ဗျောင်လိမ်”
အင်း သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ကလိုက်ပြလို့သာ စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေလို့သိရတာ သူဇတ်သူ့အရပ်နဲ့တော့ အဟုတ် အတိုင်အဖောက်ညီကြပေသကိုးလို့ဘဲ ကေက်ချက်ချရင်း လေးသွဲ့သောစိတ်နဲ့ သူငယ်ချင်းကိုနုတ်ဆက်ကာ စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှ ပြန်ခဲ့လေသည်။
ဆိတ်သား လည်း ရောင်းတုန်း….
တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကလည်း ပြောရတုန်း….
နာလည်း ဆိတ်သား သွားရောင်း အုံးမှ…………
ဟိဟိ ဟိုနေ့ကပဲ သမတကြီးက အနုပညာရှင်တွေခေါ်တွေ့ပြီး အနုပညာရှင်တွေ အသုံးပြုဖို့ ဇာတ်ရုံကြီး ခန်းခန်းနားနားဆောက်ပေးချင်တာ ပိုက်ပိုက်မချိတော်မူလို့ ဇိနပြည်ကို အကူညီတောင်းရအုံးမယ်လို့ ပြောလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလား
သူ့အရပ် သူ့ဇာတ် မှာ အတင်းကို မရမက ဝိုင်း ဖင်မ ပေးချင်သူတွေ ရှိနေမှတော့ မင်းကြီးတို့ အောက်ခြေလွတ် နေတာ မဆန်းပါဘူး။
ကြက်ဥ နဲ့ ကြက်မ ဘယ်က စ ဖျက်ရမယ်မသိ။
အဲဒီက မင်းကြီးများ ထွက်လာတဲ့ ပုံတွေကြည့်မိရင် ဒီက မင်းကြီးများ ရဲ့ လူတွေကို မျက်နှာချိုသွေးနေရတဲ့ ပုံကို အားတောင်နာမိတယ်။
ဒီမှာ တစ်ချို့များ ဝန်ကြီးချုပ် ကို ရန်တွေ့နေတာ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်။